टी ट्वान्टी अन्तराष्ट्रियमा सर्बाधिक धेरै रन बनाएका नेपालका ६ खेलाडी : शीर्षस्थानमा कप्तान पारस खड्का – onlinekhelkhabar.com
टी ट्वान्टी अन्तराष्ट्रियमा सर्बाधिक धेरै रन बनाएका नेपालका ६ खेलाडी : शीर्षस्थानमा कप्तान पारस खड्का
अनलाइन खेल खबर संवाददाता	Posted on आश्विन १८ २०७६, शनिबार
असोज १८ , अनलाइन खेलखबर ।। सन् १९८८ मा क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ( आईसीसी ) को सदस्य बन्दै १९९६ मा एसोसियट मान्यता प्राप्त गर्दै क्रिकेटका प्रतियोगितामा सहभागी जनाउन लागेको नेपालले टी -ट्वान्टी मान्यता र अघिल्लो बर्ष एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको अबस्था छ ।
विगत लामो समय क्रिकेटमा निरन्तर लागिपरेको नेपाल केहि वर्ष यता एक पछी अर्को सफलता हात पार्दै आएको छ । नेपालले विश्वकपको समेत स्वाद चाखिसकेको छ । हामिजस्ता क्रिकेटका उदायमान मुलुकलाई यी सहभागी हुनु पनि एक किसिमको ठुलो सफलता नै हो ।
नेपालले सन् २०१४ मा एसियाली मुलुक बंगलादेशमा भएको आईसीसी टी -ट्वान्टी विश्वकपमा सहभागी मात्र जनाएँन निकै राम्रो छाप जोड्न सफल भएको थियो । विश्वकपको दौरान नेपालले हंगकंग र अफगानिस्तानलाई नराम्रोसँग हराएको थियो । भने टेस्ट मान्यता प्राप्त बंगलादेशबिरुद्द नेपाली टिमले डटेर खेलेको थियो ।
पहिलो पटक विश्वकप खेलेपछि क्रिकेटको क्रेज अझ नेपालमा ब्यापक पायो । नेपालकोप्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै आईसीसीले नेपालका खेललाई टी -ट्वान्टी मान्यता दियो र नेपाली टिमको खेलाडीको रेकर्ड राखिन सुरु गर्न थालियो ।
यसैबीचमा त्यसबेला देखि अहिलेसम्म नेपाली खेलाडीले केहि विश्व कीर्तिमानी समेत कायम गर्न सफल भएका छन । भने केहि व्यक्तिगत रुपमा पनि आफुलाई प्रमाणित गर्ने क्रममा रहेका छन ।
सोहि क्रममा अहिलेसम्म आईपुग्दा टी – ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको तर्फबाट सर्बाधिक धेरै रन बनाउने ६ खेलाडीको बारेमा हामिले यस सामाग्रीमा चर्चा गरेका छौ । क्रमश :
१ .पारस खडका : नेपाली क्रिकेटको सफलतामा ठुलो योगदान पुर्याएका टिमका कप्तान समेत रहेका पारस खडका नेपालको तर्फबाट टी – ट्वान्टी अन्तराष्ट्रियमा सर्बाधिक धेरै रन बनाउने खेलाडीको सुचिमा पहिलो स्थानमा रहेका छन ।
सन् २०१४ मा बंगलादेशमा भएको विश्वकपमा अन्तराष्ट्रिय टी – ट्वान्टीमा डेब्यु गरेका ३१ बर्षिय पारसले अहिलेसम्म अर्थात २०१४ देखि १९ सम्ममा २३ खेलमा २२ खेल खेल्दै ६४३ रन बनाईसकेका छन ।
जसमा एक शतकीय पारी र ३ अर्धशतकीय पारी सामेल रहेको छ । पारसले केहि दिनमात्रै सिगांपुरमा भएको जिम्बावे , नेपाल र सिगांपुरबीचको त्रिकोणात्मक सिरिजका दौरान घरेलु टोली सिगांपुरबिरुद्द अविजित १०६ रनको पारी खेलेका थिए । बिभिन्न विश्व कीर्तिमानी समेत बनेको यो शतक उनको अहिलेसम्मको उच्च स्कोर समेत हो ।
सिगांपुरसँगको उक्त खेलमा अविजित रहेका कप्तान पारसले ५२ बलको सामना गर्दै ७ चौका र ९ छक्काको मद्दतमा १ सय ६ रन बनाएका थिए उनकै शतकीय पारीको मद्दतमा नेपालले सिगांपुरमाथि ९ विकेटले जित हासिल गरेको थियो ।
२. ज्ञानेन्द्र मल्ल : नेपाली राष्टिय क्रिकेट टिमका उप – कप्तान समेत रहिसकेका मल्ल टी -ट्वान्टी क्रिकेटमा धेरै रन बनाउने सुचीमा नेपालको तर्फबाट उनि दोस्रो नम्बरमा आउँछन ।
नेपाली यु -१५ , यु १९ हुँदै राष्ट्रिय टिममा योगदान पुर्याउन टी राष्ट्रिय टिममा आईपुगेका बिशेषत् : टप अर्डर ब्याट्सम्यान मल्लले अहिलेसम्म २१ खेलमा २० पारी खेल्दै ३३४ रन बनाईसकेका छन ।उनको अहिलेसम्मको उच्च स्कोर अविजित रहदै ५१ रनको रहेको छ ।
यो अर्धसतकीय पारी उनले साउन महिनामा सिगांपुरमा भएको टी – ट्वान्टी विश्वकप छनोटको एसिया फाइनल छनोटमा मलेसियाबिरुद्द प्रहार गरेका थिए । लामो समय देखि ठुलो पारी खेल्नबाट चुकेका बेला आलोचना बढ्दै गएको बेला मल्लले यो पारी खेल्दै आफुलाई केहि राहत दिलाउन सफल भएका थिए ।
३.शरद भेषवाकर : यो सुचिमा तेस्रोस्थानमा नेपालका अर्का अनुभवी ब्याट्सम्यान शरद भेषवाकर रहेका छन । उनले अहिलेसम्म १७ खेलमा १६ पारी खेल्दै ३१० रन बनाईसकेका छन । अहिले राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर रहेका शरदको उच्चतम स्कोर ४० रन रहेको छ ।
४ .बिनोद भण्डारी : राष्ट्रिय टिममा आक्रामक विकेटकिपर ब्याट्सम्यानका छबी बनाएका बिनोद नेपालको तर्फबाट टी ¬ट्वान्टी अन्तराष्ट्रियमा २० खेलबाट १७ पारी खेल्दै १७२ रन बनाउंदै यो सूचिको चौथो स्थानमा रहेका छन । पछिल्लो समय नियमित राष्टिय टिमका सदस्य नभएका बिनोद भण्डारी अहिले भने टिममै रहेका छन ।
५. सोमपाल कामी : मुख्यत उनी नेपालका तिब्र गतिका बलरमध्ये एक पर्छन । बलिङ बिभागको लगभग उनले नै नेतृत्व गर्दै आएका छन् । उनले पनि राष्ट्रिय टिमबाट धेरै समय भयो बिताएको , अनुभवको कमि उनीमा रहेको छैन । पछिल्लो समयमा नेपालले खेल्ने लगभग सबैमा उनको उपस्थिति रहदै आएको छ ।
जसमा उनले टिमका लागि न्याय समेत पुर्याउदै आएका छन । राम्रो प्रेशमा बलिङ प्रस्तुत गर्ने सोमपालले पछिल्ला केहि खेलमा उत्तिकै राम्रो ब्याटिङ गर्दै सबैलाई चकित बनाउंदै आएका छन ।
अहिले त् उनलाई टिमले अलराउण्डरको रुपमा लिन थालिसकेको छ । अझ उनले घरेलु लिगमा ओपनिङ ब्याटिङ समेत गरिसकेका छन ।
अन्तराष्ट्रिय टी -ट्वान्टीमा उनले अहिलेसम्म २४ खेलमा १५ पारी खेल्दै १६७ रन बनाईसकेको अबस्था छ । उनले उच्चतम स्कोर अहिलेसम्म ४० रनको रहेको छ ।
६ .दिपेन्द्र सिहँ एरि : दिपेन्द्र सिहँ एरि अर्थात नेपाली क्रिकेटको आशालाग्दो अनुहार जसले छोटो समयमै टिमको भरोशालाई जित्न सफल भएका छन । हो उनैं दिपेन्द्र टी – ट्वान्टीमा सर्बाधिक धेरै रन बनाउने खेलाडीको सूचीमा छठौ स्थानमा रहेका छन ।
हाल राष्टिय टिमको उप -कप्तान समेत रहेको दिपेन्द्रले मात्र ९ पारी खेल्दै १५७ रन बनाईसकेका छन । जसमा अविजित ४७ रन उनको अहिलेसम्मको ठुलो पारी रहेको छ ।
Previous Postओमानमा आज देखि टि – ट्वान्टी सिरिज सुरु हुँदै : नेपालले भने भोलि हङकङको सामना गर्ने
Next Postआयोजक ओमानको विजयी सुरुवात